बेलभारमा सरसफाई – sunpani.com
भीष्म लोध (नेपालगञ्ज) – बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं.–२ स्थित बेलभार गाउँमा सोमबार सरसफाई गरिएको छ ।
मधेसी समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको यो ठाउँमा गेरुवा ग्रामीण जागरण संघ बर्दिया र वडा कार्यालयको अगुवाईमा पहिलो पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित सरसफाई गरिएको हो । गाउँमा सचेतनामुलक ¥यालीमार्फत सूचना प्रशारण गरिएको छ भने गाउँको मुख्य बाटोमा सरसफाई गरिएको छ ।
जानकी गाउँपालिका वडा नं.–२ को वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी बेलभार र सशस्त्र प्रहरीसहित अन्य सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय सहकार्यमा सरसफाई कार्यक्रम गरिएको जानकी वडा नं. २ अध्यक्ष चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । सचेतनामुलक ¥यालीका क्रममा खुला रुपमा दिसा, पिसाव नगरी शौचालयमा मात्र गर्न, आफनो घर आँगन, टोल सफा राख्न, जथाभावी फोहोर नफाल्न अनुरोध गरिएको थियो ।
जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. २ स्थित भैयापुर र चौधरीपुरलाई पूर्ण सरसफाई टोल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । वडा कार्यालयको समन्वयमा गेरुवाले सो समुदायलाई पूर्ण सरसफाई घोषणा गर्न लागि परेको छ । जसका लागि वडा नं. २ को कार्यालयले पनि सक्रियतापूर्वक लागि परेको वडा अध्यक्ष गुप्ताले बताउनुभयो ।